Aqoonkaab 5 Arrin oo kor uqaadaaya Caafimaadka Maskaxdaada. | Aqoonkaab
5 Arrin oo kor uqaadaaya Caafimaadka Maskaxdaada.
Jul 09, 2015Caafimaadka
ku raaxaysiga maskax caafimaad qabta waxay la micno tahay inaad dareento tahay qof dhamaystiran.awood uleh shaqa kasta inta lagu duga jiro malinkasta oo nolosha iyo inaad dareento kalsoonidii naftaada oo sare usocoto.waxaa jira ficilo aad samaynkarto si maskaxdada cafimaadkedu kor ugu so kaco .Bahada aqoonkaab waxay kuso gudbinaysaa 5 ficil oo ku sahlaaya in caafimadka maskaxdaadu sare usocdo.
1.La xidhiidh dadka .lasamee xidhiidh awood badan dadka kugu xeeran waxay kor uqaadaysaa heerkaga nolaleed,
tayadadeena shakhsi ahaneed waxay samayn xoogan ku leedahay maskaxdeena iyo sida ay ushaqayso .gali waqti iyo dadaal inaad dhisto xidhiidh a wood badan .
2.samee waqti raaxo. dajiso waqti aad ka qabato hawlo,Rajooyin iyo mashquuciyo aad ku raaxaysato.kadib markaad hawl wayn qabato naftaada si nasino iyo raaxo kufilan. sida inaad la ciyaarto caruurtada walaalada.samee wax kasto farxad ku dareemaysid oo aan diintaada ka hor imanayn.
3.Ka qayb qaado dano wadaag.
ku biir urur ama koox dada kuwaso aa wadagtaan dano gaara .ka mid ahaanshiyaha koox dada oo aa wada leedihiin dano idinka dhaxeeya waxaad ka helaysaa dareen ah maskax cafimaad qabta .ku biir koox ciyaara iyo wax la mida
4.u tabaruc bulshadaada..
Uhur waqtigaagga sida jaarkaaga oo aad caawiso haday dhib haysato .la shaqee bulshada sida qashin gurka nadiifinta wadooyinka ama inad wax wanaagsan u qabato saxiibka.waxa jira wax daban aad ugu tuba ricikarto kuna dareensinkara farxad .tano kor uqaadaysa caafimadka maskaxdaada .dadaalka aad ku bixiso inad hagaajiso nolosha dadka kale waxay hubaaltiya inay kor uqaadi doonto noloshaada.
5.ka fakar naftaada.cun cunto dheeli tiran waxay kaa caawin dontaa inad hesho jidh caafimaadqaba .caafimaadka muqaalka iyo kan maskaxduba waa laba shay oo aad isugu xidhan .
-Bilaal axmed Cige–
Previous Post5 CAASIMADOOD E DUNIDA UGU QURUXOON .IYO WADAMADOODA, Next PostFinanka kaa so yaca wajiga waxay ku ku sheegayaan digniino caafimaad.